प्रहरी हिरासतमा युवक आत्महत्या प्रकरणः घटना छानबिन गर्न सात सदस्यीय समिति | Nagarik News - Nepal Republic Media
क्षतिपूर्ति दिलाउन गृह मन्त्रालयमा सिफारिस
केही दिन अगाडि पक्राउ परेको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका वडा नं. ५ का २५ वर्षे हकिव मियाँले प्रहरी कार्यालय भित्रको हिरासतमा गाम्छाको पासो लगाएर आत्महत्या गरेपछि आज बिहानैदेखि इनरुवाको अवस्था तनाबग्रस्त भएकोमा अहिले सहज भएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेष पोखरेलको नेतृत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमतिपछि अहिले सहज भएको हो।
छानबिन समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डिएसपी नरेन्द्र कार्की, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका कार्यबाहक अध्यक्ष पुनम मेहता, इनरुवा वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष वसुर मुदिन अनसारी, भोक्राहा नरसिंह वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष वसिर मनसुरी र अन्य दुई जना मृतकका आफन्त रहने सहमति भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए। उनका अनुसार छानबिन अहिलेसम्म सक्ने टुंगो नलागेपनि भोलि नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव आएपछि टुंगो गरिनेछ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मृतकका परिवारका लागि क्षतिपूर्ति दिलाउन गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने पनि सहमति भएको छ। सहमतिसँगै अहिले मृतकको शव पोष्टमार्टमका लागि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगिएको हो। बिहानैदेखि पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा अवरूद्ध भएका सवारी साधन पनि सुचारु भएका छन्।
प्रहरी हिरासतमा रहेका युवकले आत्महत्या गरेपछि तनाबग्रस्त इनरुवा
प्रकाशित: २४ आश्विन २०७८ १४:२२ आइतबार
प्रहरी हिरासत युवक आत्महत्या प्रकरण गृह मन्त्रालय